Koronaavaayirasi: Lammiileen Meeksiikoo Ameerikaanoota daangaa ce'an irratti uggurri akka taasifamu gaafatan - BBC News Afaan Oromoo
Koronaavaayirasi: Lammiileen Meeksiikoo Ameerikaanoota daangaa ce'an irratti uggurri akka taasifamu gaafatan
Goodayyaa suuraa Dallaa Nogaalees, Arizonaa bulchiinsa Meeksiikoon adda qoodu
Mormitoonni Meeksikoo soodaa imaltoonni Ameerikaa hin qoratamiin Koronaavaayirasiii tamsaasaa jiru jedhuun daandaa Ameerikaa gara kibbaa cufaniiru.
Jiraattonni magaalaa Sonoraa, daandii Meeksikoo seensisu guyyaa lammataaf akka cufan waadaa seenaniiru.
Namootni kun haaguggaa fuulaa ykn Maaskii godhatanii dhaadannoo lammilee Ameerikaatiin "Mana oolaa" jedhu qabatanii turani. Meeksikoo keessatti namootni vaayirasichaan qabaman 500 gadi yoo ta'n Ameerikaa keessa ammoo 85,000 darbeera.
Daangaan kun daldaltoota 'barbaachisoo' ta'aniif malee nama hundaaf cufamaa ta'us mormitoonni garuu qajeelfamni kun sirritti hojiirra hin oolle aanga'onnis qorannoo gaggeessa hin jirani jedhu.
Mormiin kun kan dursame miseensota gartuu 'Sonorans for Health and Life' jedhaman kan gaaffii namootni Ameerikaarra gara Meeksikoo galan hundi qoronnoo fayyaa gaggeessu qabu jedhu kaasaniini.
Miseensa gartuu kanaa kan ta'e Josee Luwis Hernaandez "weerara kana to'achuuf qoronnoon fayyaa mootummaa federaalaan gaggeefamaa jiru hin jiru. Nuti kanaaf as jirra.,'' jechuun hime.
Ameerikaan namoota koronaavaayirasiin qabamaniin Chaayinaa caalte
''Pirezidantiin Meeksikoo Andires Manu'el Loopez Obraador hatattamaan tarkaanfii akka fudhataniif waamichaa dhiyeessuf kana goona" jechuun miidiyaa Arizonaa Rippablikitti himeera.
Pirezidantiin Meeksikoos ta'e kan Ameerikaa Donaald Tiraamp akkaataa weerara kanaaf deebii kennaa jiraniif qeeqamaniiru. Obbo Hernaandez mormiin Roobii gaggeefame Pirezidaant Lopeez Obraadoriif "akeekkachiisa jalqaabati" jedheera.
Gartuun kun seerri lammileen Ameerikaa ykn Meeksikoo, kanneen guyya guyyaan hojii fi baruumsaaf jecha US'tti deddeebi'an dabalatee, kanneen daawwannaafi sababa fayyaaf daangaa akka hin dabarree dhorkuu hojiirra haa oolu jedhu.
Akkasumas lammiilee Meeksikoo US'rraa ari'amanii biyyatti deebi'aniif angaa'onni qorannoo fayyaa gaggeessu qabu jedhu.
Akka gabaasa Rippablikitti Bulchiinsa Ameerikaa, Arizoonaa, Meeksikoo dangeessu keessatti namootni vaayirasicha qaban 400 yoo ta'u namootni lubbuun darbes hedduun jiru. Ameerikaan baay'ina namoota koronaavaayirasiin hubamaniin addunyaa irraa sadarkaa 3ffaarra jirti.
Bulchiinsa Sonoraa keessatti namootni covid-19 qaban afur qofa yoo ta'an namni inni jalqabaas Bitootessa 16 irratti adda baafamees maanguddoo dhiyeenya US irraa deebi'e ture.
Pirezdantiin Meeksikoo weerara kana irrattii deebii suuta jedhaa kennuu isaaniin biyyaa keessaafi alatti qeeqi irratti dhihaataa jira.
Dabalataanis, yeroo namootni addunyaa mana isaani keessa oolu eegalanitti isaan hiriirota irratti hirmaachuuun, harka fudhee nagaa nama gaafachuufi da'immaan dhungachuuf filachuu isaaniif qeeqameera.
Kornaavaayirasii: Ameerikaan baay'ina namoota Covid-19'n qabamaniin Chaayinaa caalte